banyere: Mgbasa ozi na njikwa dị mfe | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 5, 2013 Monday, June 23, 2014 Douglas Karr
Todd Wheatland, isi nke echiche ndu na Ọrụ Kelly, dere n'oge na-adịbeghị anya banyere ịkpọtụrụ ọkwa sitere na Social Media Examiner, Ngwaọrụ Social Media nke Social Media jiri. kwuru bu ihe nlekota oru nlekota oru na nlekota oru nlekota oru.
ekwuru aha ya dika ihe eji dochie anya Google Alerts. Ha bu akwukwo akwukwo akwukwo banyere otu esi aru ulo oru site na ime ihe kariri onye ozo. Nakwa dị ka ọ joyụ zuru oke iji mee ihe, ọ na-ewe ọtụtụ ọtụtụ, ahem, 'kwuru' na ntanetị karịa ebe ọ bụla ọzọ m ji mee ihe na ọ bụrụla # 1 m gaa-na-akpọ aha gbasara ngwaọrụ. Todd Wheatland
Key Akụkụ nke kwuru
Ngwaọrụ niile - Nweta aha sitere na ebe ọ bụla. Jiri ngwa weebụ, ngwa Chrome, ụdị desktọọpụ maka PC, Mac ma ọ bụ Linux ma ọ bụ ụdị mkpanaka yana ngwa iPhone ma ọ bụ gam akporo.
Media na Social Monitoring - Nyochaa ọtụtụ nde isi mmalite na asụsụ 42 ma gbaa mbọ hụ na ị naghị efunahụ ihe ọ bụla edepụtara na netwọkụ mmekọrịta, saịtị akụkọ, ọgbakọ, blọọgụ ma ọ bụ ibe weebụ ọ bụla.
Ọrụ Otu - Wulite otu gi, kesaa ihe ngosi gi ma ekenye ndi otu gi oru: juo onye isi ochichi gi ka o zaghachi tweet, jua CMO gi ka o kwuo okwu na blọgụ, ma debe omume nke onye obula.
Ihe ngosi oge - Ina alerted na ezigbo oge site na push ificationsma Ọkwa. Nata anata kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu email. Egbula oge ọ bụla. Mee ngwa ngwa na nke ọma.
Na-aga na-na-na-laa - Jikọọ akaụntụ mmekọrịta gị (Facebook, Twitter) na ọkwa gị wee meghachi omume na-ahapụ ngwa ahụ. Chegharia aha, dị ka ma ọ bụ kesaa aha ọma na peeji Facebook gị, zipụ aha site na email, wdg.
Ru ọgụgụ isi - Bibie mkpọtụ na-abịa site na homonyms na spams. Chọta ederede dị mkpa. Nweta ụda gị kwuru. Teknụzụ anyị niile na-amụta site n’agụ omume gị.
Statistics & data mbupụ ngwá ọrụ - Were foto, asụsụ na oge ahọrọ karịa. Nweta akụkọ PDF na data mbupụ na CSV. Jiri onwe gị tụnyere ndị asọmpi gị.
E nwere prisedị ụlọ ọrụ banyere, nakwa nke na-enye njikwa njikwa, imekọ ihe ọnụ, mmekọrịta akaụntụ mmekọrịta na njikwa otu.
Tags: enterprisebanyerenlekota oru mgbasa oziOgbogu Okonji